Madaxweyne Xasan sheikh oo New York kula kulmay madaxda dalal kale iyadoo uu furmay shirkii QM – Radio Daljir
Seteembar 25, 2013 5:58 b 0
New York, September 25, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh maxamuud ayaa ka qayb=galay shirka sanad-laha ah ee Qaramada midoobey, kaas oo ka dhacay magaalada New York isla markaasna ay joogeen 194 dal oo caalamka ah.
Shirka oo shalay furmay ayaa waxaa lagu soo qaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaalada dalalka ay mushkiladuhu ka jiraan, sidoo kale madaxweyne Xasan sheikh ayaa kulamo gaar la qaatay qaar ka mid ah madaxda shirka.
Wasiirka arrimaha debeda ee Saudi Arabia iyo madaxweynaha ayaa kulan gooni ah ku yeeshay New York, waxay ka wada-hadleen xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed iyo in la koriyo taageerada sucuudigu siiyo dalka Soomaaliya.
Docda kale madaxweyne Xasan sheikh ayaa magaalada New York kaga qayb-galay shirar gaar? ah oo ay yeesheen dalalka Islaamka, iyo shirkii dalalka urur gobolleedka IGAD oo looga hadlayey arrimaha dalka Kenya iyo xaalada ka aloosan Nairobi.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta la filayaa in uu la kulmo madax uu ka yahay hugaamiyaha Turkiga iyo wasiiro ka socda dalka Norway oo shirka Qaramada midoobey jooga, war-baahinta dowladda Soomaaliya ayaa sidaas xaqiijisay.
Baahin: Arbaca, 25 Sep 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso